international short news Archives - Page4of 69 - News @ M-Media
နိုင်ငံတကာ သတင်းတို (စက်တင်ဘာ ၆၊ ၂၀၁၅)
စက်တင်ဘာ ၆၊ ၂၀၁၅ M-Media ဆီနီဂေါတွင် ဆေးဘက် ကယ်ဆယ်ရေး လေယာဉ်တစ်စီး ပျောက်ဆုံး ………………………….. လူ ၇ ဦးတင်ဆောင်ကာ ဘာကီနာဖာဆိုမြို့တော် အော်ဂါဒူဂူသို့ ပျံသန်းသွားသည့် ဆီနီဂေါ ဆေးဘက် ကယ်ဆယ်ရေး လေယာဉ်တစ်စင်းမှာ[Read More…]
September 6, 2015 — နိုင်ငံတကာသတင်း
နိုင်ငံတကာသတင်းတို (စက်တင်ဘာ ၅၊ ၂၀၁၅)
စက်တင်ဘာ ၅၊ ၂၀၁၅ M-Media ဒုက္ခသည်ပြဿနာမှာ အမေရိကန်နှင့် နေတိုးအဖွဲ့တို့ကြောင့်ဟု သြစတြီးယား ထိပ်တန်း နိုင်ငံရေးသမားပြော …………………………………… ဒုက္ခသည်ပြဿနာမှာ အမေရိကန်နှင့် နေတိုးအဖွဲ့တို့၏ လုပ်ရပ်များကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု သြစတြီးယား လက်ယာယိမ်း FPO ပါတီခေါင်းဆောင် ဟိန့်ဇ်[Read More…]
September 5, 2015 — နိုင်ငံတကာသတင်း
နိုင်ငံတကာသတင်းတို (စက်တင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၅)
စက်တင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၅ M-Media ဥရောပရောက် ဒုက္ခသည်များကို ကူညီရန် အိုအိုင်စီက အလှူငွေ ဒေါ်လာ ၂ သန်း မတည်ပေး ………………………………………. ဥရောပတစ်လွှား ကြီးထွားလာသည့် ဒုက္ခသည်ပြဿနာအား ဖြေရှင်းရန်အတွက် အိုအိုင်စီက ရန်ပုံငွေ[Read More…]
September 4, 2015 — နိုင်ငံတကာသတင်း
နိုင်ငံတကာသတင်းတို (စက်တင်ဘာ ၃၊ ၂၀၁၅)
စက်တင်ဘာ ၃၊ ၂၀၁၅ M-Media လယ်ယာထွက်ကုန်ဈေးအတွက် ပြင်သစ်လယ်သမားများ ထွန်စက်မောင်း ဆန္ဒပြ ………………………………………….. လယ်ယာထွက်ကုန်များ၏ ဈေးနှုန်း မျှတမှုမရှိခြင်းကို ဆန္ဒပြသည့်အနေဖြင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းမှ လယ်သမားများမှာ ၎င်းတို့၏ ထွန်စက်များကို ပဲရစ်မြို့သို့ ယနေ့မှစတင်ကာ မောင်းနှင်ခဲ့ကြသည်။[Read More…]
September 3, 2015 — နိုင်ငံတကာသတင်း
နိုင်ငံတကာ သတင်းတို (စက်တင်ဘာ ၁၊ ၂၀၁၅)
စက်တင်ဘာ ၁၊ ၂၀၁၅ M-Media ယူကရိန်းဆန္ဒပြမှု သေဆုံးသူ ၃ ဦးရှိပြီ ………………………………. ရုရှားလိုလားသူ ခွဲထွက်ရေးသမားများအား ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှု အခွင့်အာဏာ ပိုမိုပေးထားသည့် ယူကရိန်းအစိုးရ၏ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ချက်ကို ဆန့်ကျင်သော ပြည်သူများ၏ ဆန္ဒပြမှုအတွင်း[Read More…]
September 1, 2015 — နိုင်ငံတကာသတင်း